SPA HOUSE Bridport - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguKaidan
Ukujonga iintaba, imilambo kunye nolwandle. Ukuhamba umgama ukusuka elunxwemeni iicafe kunye neevenkile. Indawo yabucala, idesika enkulu yangaphandle kunye nebhafu eshushu kunye nemibono emihle. Ingaphakathi eliqhelekileyo, igumbi lokuhlambela laseBalinese kunye nelanamhlanje ngokucofa ukugqiba kwe-eclectic.
Ilungele ukubaleka kosapho lwakho olufikelelekayo, impelaveki yothando, okanye uhambo lwegalufa.
I-Spa Retreat ime umgama wokuhamba ukuya kwindawo ethandekayo ye-10km yogcino lweentyatyambo zasendle zokuhamba / umkhondo webhayisekile, ulwandle, iinkundla zentenetya, iivenkile, ii-pubs kunye neCafé yase-Australia yonyaka, i-Bridport Café. Ukuqhuba okufutshane kwaye ungazifumana useBarnbougle, iikhosi zeGalufa ezidumileyo kwihlabathi, kunye neendawo zokutyela ezibalaseleyo kunye nemivalo.
(qiniseka ukubhukisha kwangaphambili itafile)
Ngaphantsi kohambo lwemizuzu engama-30, unokuba kumnyango wegumbi elingaphantsi kwePipers Brook Vineyard, kunye nendawo yokuthengisa iwayini edumileyo yaseJantz. Kunye neendawo ezininzi zewayini zesitayile se-boutique ecaleni kwendlela entle yewayini. Okanye iFama yeLavender yaseBridestowe edumileyo.
Ukuqhuba okufutshane nje kwemizuzu engama-45 kuya kukwenza ukuba ufike, udidi lwehlabathi lwe-BLUE DERBY iindlela zebhayisekile zasezintabeni, okanye iHOLLYBANK iindlela zebhayisekile zasezintabeni.
I-Spa Retreat inendlu ethandekayo yolwandle ivakale, enedesika enkulu ejonge iimbono ezintle. Zola kwindawo ye-spa ngelixa uphumle imini yonke, okanye wonwabele iwayini kunye namaqamza ashushu okuphulula ngokuhlwa, indlela egqibeleleyo yokuphelisa naluphi na uhlobo losuku elunxwemeni.
Thatha ithuba lokuqesha i-kayak kabini, kwaye ujonge umlambo kunye nomgca wonxweme ujikeleze iPier endala.
4.75 · Izimvo eziyi-292
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi292
I-Bridport iku-hub ye-adventure kunye nobuhle.
Umbuki zindwendwe ngu- Kaidan
Iindwendwe zinokufowuna okanye zithumele i-imeyile kulo naliphi na inqanaba lokuhlala apho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bridport